ရင်သားကင်ဆာ-နို့တိုက်ကျွေးရေး, အစာ / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
"မ '' နို့? "သင်နို့ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့, (သောက်, စား) လုပ်ဖို့လိုအပ်ကဘာလဲ?" "ကလေးရင်ပတ်ပေါ်မှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါသည်, အစဉ်မပြတ်ငါသူအတွက်လုံလောက်သောနို့ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းဝမ်းနည် ... " "ငါတို့ရန်ရှိသည်, ငါတဦးတည်းတိုက်ကျွေးနေတဲ့ကလေးကရင်သားနှစ်ဘက်ပေးပေမယ့်ဒီမလုံလောကျ finish ကိုနို့တိုက်ကျွေးရေးအရောအနှော။ နို့၏ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? "" နို့သွားပြီလျှင်, ငါပြန်ရနိုင်ပါသလဲ? "အလွန်မကြာခဏမိခင်များမှလှည့်နေကြသည် ...
နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းနို့ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို Read more »
ရင်သားကင်ဆာ-နို့တိုက်ကျွေးရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အခါသင်နို့တိုက်မှသင်၏ကလေးနို့ကွာသင့်သလဲ အသက်သုံးလအထိ, ဒါပေမယ့်နို့နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သူမိခင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖြစ်ပါသည် - အဲဒီမှာမဖြစ်မနေနို့တိုက်ဘို့နိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ နို့ပြီးနောက်ထိုသူငယ်အပေါငျးတို့သညျအရေးကွီးအာဟာရအားလက်ခံတွေ့ဆုံဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှရှည်လျားနို့တိုက်ကိုဆက်လက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါခေါ်သည့်သဘာဝနှိုးဆော်သံအသံငါ့အမိရှိပါတယ် ...
ဘယ်လိုနို့တိုက်ရာမှကလေးတစ်ဦးနို့ကွာသူ့ကိုထိခိုက်စေမည်မဟုတ် Read more »